Momba anay - Protech International Group Co., Ltd.
Hatsarao ny firaisan'ny orinasa ary alao ny kolontsain'ny orinasa. Famintinana ny fisaorana, fiderana amin'ny faran'ny taona, ary alao an-tsaina ny ho avy!
Protech International Group Co., Ltd. maka ny vokatra enti-mandeha amin'ny herinaratra ho fotony, ao anatin'izany ny mpanara-maso tontolo iainana anatiny sy ivelany, fitaovana sy metatra maranitra ary sehatra fifandraisana rahona, izay ampiasaina amin'ny fitsapana elektronika sy elektrika, fanaraha-maso tontolo iainana anatiny sy ivelany, fanaraha-maso ny famantarana ara-pahasalamana ary sehatra hafa. Mpanome vahaolana tanteraka. Ireo vokatra dia aondrana any amin'ny firenena maherin'ny 100 sy faritra toa an'i Eropa, Amerika ary Azia atsimo atsinanana. Ny mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena lehibe dia i Leroy Merlin, Foucault ary marika iraisam-pirenena hafa, ary i Shina dia miara-miasa amin'i Xiaomi, Huawei ary sehatra hafa.
Protech International Group Co., Ltd dia manana birao sy orinasa mitambatra, mirefy 1,500 metatra toradroa. Any amin'ny Distrikan'i Nanshan, Shenzhen, faritanin'i Guangdong, no misy azy any amin'ny faritry ny faritra Shenzhen. Afaka mampifandray ny mpanjifa anatiny sy vahiny amin'ny halavirana fohy izy io. 40 minitra monja no hahitan'ny mpanjifa ny adiresin'ny orinasa avy amin'ny seranam-piaramanidina.
Protech International Group Co., Ltd dia mandray ny vokatra maivana amin'ny finday avo lenta, ao anatin'izany ny mpanara-maso tontolo iainana anatiny sy ivelany, fitaovana sy metatra maranitra ary sehatra fifamatorana rahona, izay ampiasaina amin'ny fitsapana elektronika sy elektrika, fanaraha-maso tontolo iainana anatiny sy ivelany, fanaraha-maso ny famantarana ara-pahasalamana sy ny sehatra hafa. Mpanome vahaolana tanteraka. Ireo vokatra dia aondrana any amin'ny firenena maherin'ny 100 sy faritra toa an'i Eropa, Amerika ary Azia atsimo atsinanana. Ny mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena lehibe dia i Leroy Merlin, Foucault ary marika iraisam-pirenena hafa, ary i Shina dia miara-miasa amin'i Xiaomi, Huawei ary sehatra hafa.